Ahoana no hividianana rindran-dalàna momba ny kalitao ary hahita ny tranokalako eo an-tampon'ilay fikarohana Google?
Tsy midika mihitsy fa ny fananganana sehatra backlink-kalitao no fomba tsara handroahana ny tranokalanao eo an-tampon'ny SERPs Google. Nahoana? Satria satria efa fantatry ny besinimaro tsara fa ny iray amin'ireo sehatra matanjaka indrindra (fahatelo manan-danja indrindra, mba ho marim-pototra kokoa) izay heverin'i Google amin'ny fanomezana mari-pankasitrahana ao amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana. Ankoatr'izay, ireo izay efa mahafantatra ny fomba hividianana rindran-tsavily tsara dia tsy tokony hisalasala ny hampiasa fotoana sy ezaka hanohanana ny fivoarana ara-barotra miaraka amin'ny PR avo na fanorenana azy ireo. Izany dia handoa foana, azo antoka.
Ny sisa - ny backlinks mafy orinasa na governemanta (i. f. , avy amin'ny dot EDU sy ny loharanon-tserasera GOV online miaraka amin'ny fitokisana sy fahefana ambony indrindra) dia mahery kokoa. Afaka manatsara kokoa ny endriky ny aterineto izy ireo noho ny mety ho tranokala na orinasa na orinasa na orinasa na orinasa na orinasa.Ary ny zava-misy dia mangatsiaka iray monja, fa ireo ankizy ireo dia mbola manontany tena ihany koa ny fomba hividianana rindran-damba tsara avy amin'ny tranonkala fampianarana na governemanta. Andao hiatrika izany - ny rosoa voaray dia tsy azo atao any. Midika izany fa indraindray ianao tsy mila mahafantatra ny fomba hividianana rindran-damba tsara mihitsy - tsotra fotsiny satria izy ireo ihany no azo. Ahoana? Amin'ny ankapobeny dia mila ny asa mafy ataonao izy ireo amin'ny fanoratana sehatra manan-danja iray, mba hahazoana ny lisitra fidiram-bola sy valisoa amin'ny farany.
Miverena any amin'ny teboka, andao hizaha azy io - ahoana no hividianana safidy tsara safidy tsara. Ny zavatra dia tsy misy torolàlana ankapobeny na toro-hevitra miaraka amin'ny vokatra azo antoka. Midika izany fa tsy afaka manana drafitra hetsika mazava sy marina ianao mba hahazoana antoka ny valiny azo antoka sy ara-drariny (i. f. , rohy mety tena miasa ho an'ny fandrosonao, miaraka amin'ny fotoana tsy manangona saina mena miaraka amin'i Google). Raha ny marina, ny fampiharana amin'ny rohy naloa dia tsy misy afa-tsy ny drafitra manahirana ny Gray-Hat na ny Black-Hat SEO. Ary mazava ho azy, matetika ny ankamaroan'ny rindran-bokotra novidiana dia toa manantena ny hitovy amin'ny voajanahary ho an'ny olon-drehetra - ireo mpikaroka mivantana, ary ny mikapoka bots.
Na izany aza, mbola mino aho fa aleo misoroka tsara kokoa amin'ny fitadiavana ny motera fikarohana - raha tsy te-hanangom-bola sazy fohy. Na izany na tsy izany, raha mbola mahatsiaro ho sahisahy ianao raha te hanandrana ny fividianana refy amin'ny vidiny rehetra dia diniho ireto bala manaraka ireto, farafaharatsiny mba tsy ho tratra na voavakivaka indray mandeha:
Aza adino amin'ny Internet loharano na ireo pals mivantana amin'ny filazana fa efa nomena fivarotam-panafody izy ireo.
Ataovy azo antoka fa ny kandidanao mety dia manery ny domains sy votoatin'ny tranonkala mifandraika amin'ny nichanao, na orinasa topi.
Manaova fanaraha-maso indroa momba ny fahefana an-tsena, ny fahefana an-takila, ary ny pejin'ny PageRank mba hahazoana ny fifamoivoizana sy ny fitokisana indrindra amin'ny mpihaino.
Tsara tokoa, tokony hanao fifanarahana amin'ireo mpitoraka blaogy ao amin'ny fonosanao ianao. Satria efa vonona ny hanolotra azy ireo votoaty sarobidy ianao, izay haka fotoana kely. Raha tsy izany, dia handoa saram-pitsaboana mety aminy izy ireo. Momba ny raharaham-barotra, sa tsy izany?
Kodiarana an-tsarimihetsika (fifanakalozan-dresaka), PBN (raha tsy izany, tambajotram-bilaogy tsy miankina), ary koa ny serivisy mora vidy izay mamatsy lisansy goavam-be mavesatra, na ireo mailaka manelingelina izay manosika ny toerana eo amin'ny loharano avo lenta - miala amin'ny "mpamatsy" toy izany. Satria efa nantsoina ny sazy fanamelohana (na fandrarana maharitra ny fikarohana). Na ho ela na ho haingana, Google dia tonga ho azy rehetra - ireo "mpandraharaha" tsy manana zo ireo, ary ny "mpanjifany" mampalahelo azy ireo Source .